Dhawunirodha Chirongwa Ichi Chatakavaka Kugadzirisa Chirongwa chedu? | Martech Zone
Chishanu, May 9, 2008 Chishanu, May 9, 2008 Douglas Karr
Vatengi vedu vanoshandisa PCAnywhere yezvinhu zvavo zvekutsigira. Ndiri kumhanya Vista - saka pandakaedza kurodha yedu ine rezinesi mutengi, ndakakurumidza kusangana neshoko risingapindirane uye mugadziri akarega.
Mukushanyira iyo Symantec saiti, ivo zvechokwadi vakagadzirisa inoenderana nyaya ne Upgrade kushanduro 12.1. Iyo nyoka? Iwe unofanirwa kubhadhara $ 100 yekuvandudza. Ndinofanira kuva nayo, saka ndakabhadhara $ 100 yacho. Kubhadhara madhora zana kuti chikumbiro chingoshanda mushure mekunge wabhadhara marezinesi ekutanga zvisati zvanyatsokwana kukuita kuti utsamwe.
Izvozvi zvandava ne12.1 yakatakura, ndiri kuva nematoni ematambudziko nazvo. Iyo app inoita kunge iri kumhanya kana ndikatarisa muTask Manager, asi hwindo hapana kwarinowanikwa. Uye kana ndikakwidza hwindo, harina chinhu zvachose. Ndakatanga kuongorora nyaya iyi mumaforamu eSymantec. Imwe tsamba yandakawana yaive chinyorwa chikuru pane iyo Symantec Autofix chirongwa.
Ndeipi kambani software inonyora chirongwa chinogadzirisa nyaya dzinokanganisa chirongwa chavo chepakutanga? Ini ndinofungidzira Symantec ichave iri kambani.
Hei Symantec: Kana iwe uchiziva kuti dambudziko nderei uye kuti ungarigadzirisa sei, isa gadziriso mune yako yepakutanga kunyorera !!!
Mushure mekuisa iyo Autofix chirongwa, PCAnywhere ichiri kuenderera kuve nenyaya. Ini cringe pandinofanira kushandisa chero chirongwa cheSymantec… Ndanga ndichinyora nezvavo kwenguva refu.
Tags: makadhiiphone plugintheme ye iphonejramersindasitiri yenharekushambadzira kwekunzeWordpress admin
Wedzera iyo Twitter Icon kune yako Blog
May 10, 2008 pa 8: 59 AM
Windows Vista… kutanga kwekuguma kweMicrosoft?
Aug 22, 2008 pa 5: 58 AM
Kana iwe uri kuwana izvi nguva dzose, edza zvinotevera:
- Vhura sessioncontroller.exe - iwe uchawana izvi muchirongwa chekuisa dhairekitori.
- mira mashoma mashoma
- wobva wadzvanya kaviri uye kuvhura pcAnyowani (winaw32.exe)
Iyo isina chinhu skrini inokonzerwa nepcanypapi nguva yekumirira kumirira sessioncontroller.exe kuti itange.
Izvi zvakagadziriswa muna 12.5 - parizvino muBeta pa http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
Gumiguru 22, 2008 na5: 05 PM
Ok, zvakanaka… kunze kwekuti yega .5 yekuvandudza (uye mamwe ma .1 anovandudza) tambo yechigadzirwa yakasarudzika, inoda kutenga kwekuwedzera. Kwemadhora mazana maviri (kunyangwe ne $ 200 "kusimudzira" rebate), ini ndinotarisira kuti yangu chigadzirwa chigadzirwa kuti chishande, kunze kwebhokisi, pasina nyaya. Pakarepo. Kwete mushure mekumirira mwedzi mitanhatu, kana kunyangwe mushure mekumirira 100mb yekuvandudzwa kubva kune yavo LiveUpdate system ... iyo, zvinonakidza zvakakwana, inongoona chikamu che software yavo yakaiswa. Nei isinga gadzirise * zvese * zveSymantec software yangu panguva imwe chete, pachinzvimbo chekuda 6 dzakasiyana LiveUpdate zviitiko zvezvinhu zvinomwe zvakapatsanurwa kubva kukambani imwechete?
Kudzokera kugripe yangu yepakutanga… sei ndichifanira kubhadhara zvimwe kuti ndiwane izvo zvinofanirwa, kana zvirinani, kuve chigamba chakaburitswa kune vashandisi ve12.1, nevermind 12.0 (iyo yaisashanda paVista)?